इन्टरपोलमा नाम, ससुरालीमा सान « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
इन्टरपोलमा नाम, ससुरालीमा सान
६ चैत्र २०७०, बिहीबार ०७:१४ मा प्रकाशित
काठमाडौं, ६ चैत । डा. उपेन्द्र देवकोटाकी छोरी अपहरणदेखि दर्जनौँ डकैती काण्डका नाइके गोकुल गिरी नयाँ श्रीमतीका साथ ससुरालीमा सुतिरहेका थिए । काठमाडौंबाट गएको प्रहरीले विराटनगरस्थित उनको ससुरालीको ढोका ‘नक’ गर्दा मंगलबार बिहान करिब चार बजेको थियो । गिरीले ढोका खोल्नासाथ आफ्ना हात हत्कडी लगाउन अगाडि सार्दै प्रहरीलाई भने, ‘तपार्इंहरूले १र२ बजे घरमा छापा हान्ने होइन, किन ढिला आउनुभएको रु’ प्रश्नले गिरी कतिसम्म पेसेवर अपराधी हुन् भन्ने प्रस्ट पार्दछ ।
धेरै समय भारतमा बस्ने र कहिलेकाहीँ नेपाल आउने गिरी पाँच वर्षदेखि प्रहरीसँग लुकामारी गर्दै आएका थिए । तर, उनको धन्दा निरन्तर चलिरहेको थियो । यसबीचमा उनले पूर्वराजपरिवारका सदस्यदेखि ठूला व्यापारीसम्म धेरैको घरमा डकैती मारिसकेका थिए । तर, महानगरीय प्रहरी परिसरबाट इन्स्पेक्टर कुमोध ढुंगेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले उनलाई फन्दामा पारेको हो ।
गिरीको टोलीले डा. उपेन्द्र देवकोटाकी छोरी मेघाको अपहरण गरी एक करोड ३० लाख फिरौती लिएर छाडेको थियो । १९ साउन ०६५ मा उनले मेघाको अपहरण गरेका थिए । प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकै वेला फिरौती लिएर उनी भाग्न सफल भएका थिए ।
हुलिया बदलेर नेपाल–भारत गर्दै आएका उनले तीन महिनाअघि बिहे गरेको खुलेको छ । परिचय ढाँटेर बिहे गरी उनी विराटनगरस्थित ससुरालीमा बस्दै आएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
नाम सानुकाजी महत र घर दाङ भएको भन्दै उनले केटीपक्षलाई झुक्याएका थिए । पक्राउ परेपछि मात्र श्रीमती र ससुरालीले वास्तविकता थाहा पाएका छन् । मंगलबार बिहान चार बजे सुतिरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि आफ्नो ज्वाइँ अपहरणमा परेको भन्दै उनीहरू स्थानीय प्रहरीचौकीमा समेत पुगे । तर, ज्वाइँ देशकै कुख्यात र फरार अपराधी रहेको थाहा पाएपछि उनीहरू पनि स्तब्ध भएका छन् ।
१५ वर्षको आपराधिक यात्रा
कहिले राजेश क्षेत्री त कहिले सानुकाजी महतको नामले चिनिने गोकुल गिरी १५ वर्षदेखि पेसेवर रूपमा अपराधमा सक्रिय छन् । १५ वर्षअघि नक्सालस्थित प्रेम गोयलको घरमा उनले डकैती गरे, तर प्रहरीलाई झुक्याउन सफल भएनन् । पक्राउ परे र एक वर्ष जेल परे । छुटेलगत्तै लैनचौरमा एक व्यवसायीको घरमा फेरि डकैती गरे । त्यतिखेर पनि प्रहरीलाई छल्न सकेनन् । पक्राउ परे र पाँच वर्ष जेल परे ।
यसरी ६ वर्ष जेल परेर निस्किएपछि उनी सुध्रनुका सट्टा झन् खुँखार अपराधीका रूपमा देखापरे । युनाइटेड एकेडेमीकी सञ्चालककी छोरीलाई बन्धक बनाई पैसा असुले । त्यस्तै डा। जगदीश वैद्यको घरमा डकैती र उनलाई अपहरण गरी फिरौती असुले । उनीहरूले डा। उपेन्द्र देवकोटाकी छोरीको अपहरण गरी फिरौती असुले । यसबीचमा उनीहरूले थुप्रै चिकित्सक तथा व्यापारीलाई धम्क्याएर असुली गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूले घरमा डकैती गर्ने र अपहरण गरेर फिरौती असुल्ने गरिरहे, तर धेरै पीडितले प्रहरीमा उजुरी नै गर्न सकेनन् ।
डा। देवकोटाकी छोरीको अपहरणको समाचार भने मिडियामा सार्वजनिक भयो, प्रहरीले पिछा गरेपछि गिरी भारत भागे । त्यसवेला उनको भागमा करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको थियो ।
केही वर्ष भारतमा लुकेपछि उनी पुरानै धन्दामा फर्किए । १८ भदौ ०५९ मा ललितपुरको धापाखेलस्थित दिनेश श्रेष्ठको घरमा हतियार देखाई उनीहरूले डकैती गरेका थिए । श्रेष्ठको घरमा उनीहरूले १६ लाख रुपैयाँबराबरको डकैती गरेका थिए । सो घटनामा संलग्न पृथ्वीबहादुर लिम्बू र सेवा तामाङ पक्राउ परेपछि मात्र प्रहरीले मोस्टवान्टेड गिरी डकैती धन्दामा फर्किएको थाहा पाएको थियो ।
त्यसको एक वर्षअगाडि गिरीकै समूहले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका आफन्त सुमनसिंह जोधाको सैंबुस्थित घरबाट करिब एक करोडबराबरको डकैती गरेको थियो । ९ भदौ ०६८ को राति हतियारसहित प्रवेश गरी उनको समूहले जोधाको घरबाट ९३ लाख ७६ हजारबराबरको धनमाल डकैती गरेको थियो ।
त्यस्तै, २८ मंसिर ०६९ मा ललितपुरको सैंबुनिवासी डा। प्रतिमा कायस्थको घरमा पनि डकैती गर्न उनीहरू सफल भएका थिए । हतियार देखाई उनीहरू कायस्थको घरबाट ११ लाख ७० हजारबराबरको धनमाल डकैती गर्न सफल भएका थिए । १८ फागुन ०६८ मा उनीहरूले चपली भद्रकालीस्थित पुण्यपाणि गौतमको घरमा धारिलो हतियार देखाई करिब २५ लाखबराबरको डकैती गरेका थिए । सो घटनामा संलग्न गिरीका सहयोगी आदेश बज्राचार्यलाई प्रहरीले यसअघि नै पक्राउ गरिसकेको छ ।
विराट सुजका मालिक विराट थापाको चपली भद्रकालीस्थित घरमा पनि उनीहरूले गत वर्ष नाटकीय तरिकाबाट डकैती गरेका थिए । गत वर्ष २५ असोजमा घरको गेटमा रहेको कुकुरलाई विषादी मिसाएको सेकुवा खान दिई बेहोस बनाएर घरभित्र प्रवेश गरी डकैती गरेका थिए । हतियार देखाई थापाको परिवारलाई नियन्त्रणमा लिई उनीहरूले डकैती गरेका थिए । गिरीले धनीको घर पहिचान गरी डकैती गर्दै आएका थिए । सबै घटनामा डकैती गरी भाग्न पनि उनको समूह सफल भएको थियो ।
दुई वर्षयता ठूला डकैती गरी मनग्य पैसा कमाइसकेका थिए । पछिल्लो समय दोस्रो बिहे गरेर उनी सिनामंगलमा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका थिए । आफूविरुद्ध इन्टरपोलको रेडकर्नर नोटिस जारी भएकाले उनी सधैँ निकै सजग भएर हिँड्ने गर्दथे । कुनै अन्जानले आफ्नो अगाडि कसैलाई फोन गरेको देखे भने पनि तर्सिएर भाग्थे । जेठी श्रीमतीसँग पनि उनी सम्पर्कमा थिएनन् । पहिला डकैती र अपहरण गरेकै पैसाले आफू चल्दै आएको उनले बताएका छन् ।
उपत्यकाका एक दर्जन डकैतीमा उनी संलग्न भएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी रमेश खरेलले बताए । अपहरण गर्दा डा। देवकोटाको घरबाट पनि उनीहरूले लाखौँको डकैती गरेका थिए । घटनामा संलग्न हेमन्त गोरे भनिने हेमबहादुर थापामगर, तिलक लामा, दिलबहादुर भन्ने सिद्धार्थ लामा र राजु थापालाई यसअघि नै पक्राउ गरिसकेको भए पनि नाइके गिरी भने प्रहरीलाई झुक्याउन सफल भएका थिए । उनलाई १४ ग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ गरिएको काठमाडौं प्रहरीका एसपी नारायणसिंह खड्काले बताए ।
ढिलै भए पनि गिरी पक्राउ परेपछि लामो समयदेखि न्यायको आशामा रहेका पीडितहरू पनि खुसी भएका छन् भने अपराध गर्नेहरू ढिलोचाँडो प्रहरी फन्दामा परेर छाड्छन् भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट